TOERAM-PIALAMBOLY “MILALAOO”: Tsy fahita any an-kafa - ewa.mg
Jeux - News - TOERAM-PIALAMBOLY “MILALAOO”: Tsy fahita any an-kafa
Cet article TOERAM-PIALAMBOLY “MILALAOO”: Tsy fahita any an-kafa est apparu en premier sur déliremadagascar.
Notanterahina tamin’ny sabotsy lasa teo, tetsy amin’ny zaridainan’ny trano fisakafoanana Il Giargino Di Lorenzo, Andohalo, ny dingana voalohany tamin’ilay lalao ho an’ireo olona mankafy mihinana “pizza” na ny ” Pizzavore”, karakarain’ny RTA. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fifantenana. Mpifaninana maherin’ny enimpolo mianadahy no nifampikatroka tamin’izany. Fantatra nandritra io andro voalohany io ihany fa tafakatra amin’ny dingana manaraka ny antsasa-manilan’ireo mpifaninana. Toy izao ny fizotran’ny fifaninana nifehy ny lalao. Izay nahalany “pizza” maro indrindra ao anatin’ny fotoana voafetra, ary mihinana betsaka indrindra noho ny mpifaninana sasany no nivoaka mpandresy. Mbola hiatrika dingana telo vao tonga amin’ny famaranana, irao telopolo tafakatra. “Sambany teto amintsika nisy fifaninanana mihinana “pizza” tahaka izao. Na tsy tafakatra ho amin’ny dingana mana­raka aza aho dia afa-po tamin’izao ezaka nataon’ny fahitalavitra Rta izao. Tsy vitan’izany fa nampiala voly anay tonga tety an-toerana ihany koa ny fanentanana sy karazan-dalao natolotry ny mpikarakara”, hoy ny mpifaninana iray milaza ny hafaliana. Amin’ity faran’ny herinandro ity indray ny fotoana manaraka ho an’ireo tafakatra sy ny mpankafy “pizza”. L’article LALAO “PIZZAVORE” AN’NY RTA :: Nafotaka ny fihinanana “pizza” teny Andohalo est apparu en premier sur AoRaha.